EGWU DỊKWA NA STEETI IMO! – hoo!haa!!
EGWU DỊKWA NA STEETI IMO!
<img src="http://www.hoohaa.com.ng/wp-content/uploads/2018/07/IMG_20180727_150946-300×216.jpg" alt="" width="300" height="216" class="alignnone size-medium wp-image-2045" /
Ndi oji egbe eje agbagbuela Sunny Ejiagwụ. Sunny bụbu onye isi oche ndi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị All Progressive Congress, (APC) nke okpuru ọchịchị ime obodo mgbago ugwu Ideatọ nke steeti Imo.
Sunny bụ onye eji ọhaneze mara so na mmadụ iri abụọ na asaa ahụ eduru n'iyi ọrụ ụbọchị Mọnde gara aga dịka ndi isi ọche otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APC n'okpuru ọchịchị ime obodo di iche iche na steeti Imo.
Onye isi ndi uwe ojii na steeti Imo bụ Dasuki Galandanchi ekwuola na nke a bụ ihe mere eme ma kwukwa na ebugalarị ozu nwa amadị a n'ụlọ nchekwa ozu. O kwukwara na ya agaruela ebe anọrọ gbue nwoke a.
Ka ọdị kịta, onwebegh ndi mọbụ onye ana-ama ime dịka ndi gburu nwoke a. Mana olile anya bụ na mgbe amara imi n'ala, na-aga-achọpụta ebe mmiri siri baa n'opi ụgbọgọrọ.
Onye isi ndi uwe ojii na steeti imo kwuru n'ọbụ n'okporo ụzọ gawara Akọkwa n'okpuru ọchịchị ime obodo mgbago ugwu Ideatọ ka a nọrọ gbagbue nwa amadị a.
Mgbe ọ na-agwa ndi nta akụkọ okwu n'isi ụlọ ọrụ APC nke steeti Imo, onye isi oche APC nke steeti ahụ, bụ Daniel Nwafọ katọrọ ogbugbu a egburu nwoke a bụ Sunny.
Mazị Nwafọ sịrị na ihe eji mara ọchịchị onye kwue uche ya abụghị ogbugbu nke ndi ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Nwafọ sịrị na ogbugbu a jọgbụrụ onwe ya n'ihi na ndi APC bụ ndi na-agbasa oziọma maka udo na mgbaghara. Ọ gara n'ihu kwue na ndi mmadụ ekwesịghị iji obi ilu na tigbue zọgbue na-eme ndọrọ-ndọrọ ọchịchị.
N'okwu ya, akwụkwọ iwu Naijiria nyere onye ọbụla ikikere ịkpa mọbụ ịnọ n'otu masịrị ya. Ọ sịrị na ha na-arịọ onye isi ndi uwe ojii ala anyị ka ọ gwa ogbo ya nke steeti Imo ka ọ gbaa mbọ niile o nwere ike ijide ndi gburu nwoke a. Ọ sịkwa na ihe ejiri mara steti Imo bụ udo nakwa ịzụ okwe ndọrọ-ndọrọ ọchịchị dịka o si kwesị ekwesi.
Previous Post: ATỌRỌKWALA ỤKỌCHUKWU NDI ỤKA KATỌLIK ỌZỌ
Next Post: ỤMỤ AFỌ IGBO ACHỌỌLA NKWADO MAKA IGBASA OZIOMA ỤKA ALAKỤBA